Muxuu Cristiano Ronaldo Ka Yidhi Saddexleydii Uu Atletico Madrid Ka Dhaliyay Ee Uu Juventus Ugu Soo Saaray Siddeed Dhamaadka UCL? – Latest Sports News
Muxuu Cristiano Ronaldo Ka Yidhi Saddexleydii Uu Atletico Madrid Ka Dhaliyay Ee Uu Juventus Ugu Soo Saaray Siddeed Dhamaadka UCL?
Cristiano Ronaldo ayaa xalay kooxdiisa Juventus ka caawiyay in ay soo dhaaftay imtixaankii Atletico Madrid wuxuuna dhaliyay saddex gool si uu Juventus ugu soo saaro siddeed dhamaadka UEFA Champions league wuxuuna kadib Ronaldo la hadlay saxaafada si uu dareenkiisa u cabiro.
Cristiano Ronaldo ayaa awooday in uu soo ceshaday qaab ciyaareedkiisii cajiibka ahaa ee UEFA Champions league kadib markii uu xili ciyaareedkan ku soo dhibtoonayay gool dhalinta tartankan wuxuuna hadda Juventus siiyay riyada ay ku sii aamintay in ay koobkan ku guulaysan karto.
Cristiano Ronaldo oo ka hadlayay kulankii Atletico Madrid iyo guushii ay gaadheen ayaa yidhi: “Waa habeen khaas ah, sababtu ma aha goolashayda oo kaliya, laakiin sababtu waa maskax fikirka kooxda ee cajiibka ahaa. Tani waa maskaxda aad uga baahan tahay Champions league, dariiqa saxda ah ayaanu ku soconaa”.
Cristiano Ronaldo oo ka hadlaya in ayna wali waxba ku guulaysan balse ay sharaf u ahayd in ay soo laabashadii Atletico Madrid sameeyeen ayaa yidhi: “Wali waxba kumaanu guulaysan laakiin kani waa il sharafeed waxayna muujinaysaa in aanu hayno dariiqa saxda ah”.
Intaa kadib Ronaldo ayaan ka gaban in uu si cad u sheego wixii ay Juventus u soo iibsatay oo habeenkan oo kale ahaa wuxuuna yidhi: “Juventus waxay halkan ii keentay waa kan, si aan kooxda u caawiyo oo aan shaqadayda u qabsado, sidaa daraadeed, waxaan ku faraxsanahay in aan ku raaxaystay habeen mucjiso ah”.
Cristiano Ronaldo oo ka hadlaya Atletico Madrid ayaa yidhi: “Iyagu waa koox fiican, waa koox aad u adag, laakiin sidoo kale anaguba waanu xooganahay, taasna caawa ayaanu muujinay. Waxaanu xaqiiqdii u qalanay in aanu soo baxno”.
Ugu danbayn Ronaldo ayaa hoos u dhigay in hadda laga hadlo finalka Champions league maadaama oo uu wali dariiq dheeri hadhsan yahay wuxuuna yidhi: “Waa xili aad u horaysa in laga hadlo wax ku saabsan finalka, aan markiiba hal talaabo qaadno”.